China Waya pajira riya fenzi welded pajira riya fenzi bindu fenzi vagadziri uye bhizimisi | Xinpan
Kune yakasarudzika fomu, kutaridzika kwakanaka uye nepakati nhanho yekuchengetedza chengetedzo, 3D chengetedzo yakasungwa waya fenzi sisitimu yakanakira nzvimbo dzekugara uye dzekuvaraidza. Uye ichiri kuvandudza mashandiro uye hupenyu hwakareba hwehushumiri kupokana nekuba nekuparadza nekuda kwewaya yaro inorema, yakaomeswa simbi yakarongedzwa, yakasunganidzwa yakazara bhaudhi gungano, rakasimba-rakasimba uye rakapoteredzwa zvine mutsindo hupfu hwekupfeka.
Kureba kweFence (2m)
Kureba kweFence (2.5m)
Kurema kg / chidimbu
Waya dhayamita mm
Kurema kg / set
Tsanangudzo ye Triangle Bend Fence
Mesh Kuvhura Wire Ukobvu Upamhi hwepaneti Kureba kwepaneru Nhamba yeFolds Post Rudzi
60 × 1.5 / 2.0mm Chikamu Post (SHS) 50X50x1.5 / 2.0mm
Surface kurapwa: inopisa yakanyikwa kwakakurudzira, kwakakurudzira + upfu zvemapuranga, kwakakurudzira + PVC zvemapuranga
Ruvara: RAL 6005 girini, RAL 7016 grey, RAL 9005 nhema, Yese RAL ruvara inogona kuvezwa.
Ongorora: Iyo fenzi inogona kugadziridzwa zvinoenderana neyako inodiwa kana pamusoro pekujekesa isina kugutsikana newe.
Zvinyorwa zvinofanirwa kuvigwa muvhu, 0.5 m mashoma kusvika 1.2 m pakakwirira.
Mapaneru akati wandei anogona kuiswa pamusoro peumwe neumwe kuti uwane kukwirira kwakakwirira.
Kusiyanisa pakati pemabhureki muchipfuva zviri nani kuve 0.3 m.
Gwaro rakazara rekumisikidza rinowanikwa kana uchikumbira.
3D fenzi ukomba kavha:
3D fenzi mapaneru akarongedzwa mumatanda mapallet uye aizozoputirwa nepurasitiki firimu yobva yaputirwa netepi yakasimba yekuchengetedzwa kwekuchengetedza pamwe nekutakura.
Kunyorera: yekugadzira fenzi yakatenderedza mafekitori, matura, zvivakwa zveruzhinji uye zvivakwa senge zvikoro, nhandare yenhabvu uye nhandare dzemitambo, nhandare, uye nzvimbo dzakazvimiririra.
Pashure: Flat kuputira reza waya 15m pane roll 10 m pa roll
Zvadaro: Yenguva pfupi fenzi kuvaka fenzi inotakurika fenzi Canada fenzi
Yakashongedza Bindu Fence
Kupeta Wire Bindu Fence
Bindu Wire Mesh Fence
Landscaping Bindu Fenzi
PVC Coated Wire Mesh Bindu Fence
Wire Mesh Fence YeBindu
Wire Mesh Bindu Fenzi